New Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris uye Oslo ndege kubva kuMilan Bergamo ikozvino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » New Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris uye Oslo ndege kubva kuMilan Bergamo ikozvino
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
New Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris uye Oslo ndege kubva kuMilan Bergamo ikozvino.
Kubatana nerondedzero yenzvimbo nyowani, zuva rekutanga remwaka wechando rakaona Eurowings ichiunza kubatanidza kunzvimbo dzinokosha dzeDüsseldorf uye bhandi remaindasitiri eRuhr, kutanga kuvhura sevhisi yevhiki nevhiki inozowedzera kusvika katanhatu-vhiki nevhiki naFebruary. 2022. Zvichakadaro Ryanair yakawedzera nzvimbo shanu itsva kubva kuMilan Bergamo - Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm Arlanda uye Toulouse.
Vafambi vendege vachave nesarudzo dzakawanda dzenzira nenzvimbo kupfuura nakare kose kubva kuLombardy gedhi munguva ino yechando.
Milan Bergamo Airport inogamuchira huwandu kune vatanhatu vatakuri vemhepo gore rino.
Kubatana kwaMilan Bergamo kupasi kwakasimudzirwa zvakanyanya mumwaka wechando wa2021-22.
Milan Bergamo iri kupa nzira dzakawanda nyowani mwaka wechando mwaka uno, pamwe nekuchingamidza kumwe kuvhurwazve uye kuwedzera frequency, kuona sarudzo dzakawanda kupfuura nakare kose kubva kuLombardy gedhi. Kutangisa nzira gumi nembiri dzemhando - gumi dzadzo dziri nzvimbo dzinounzwa kuMepu yeMilan Bergamo kekutanga - nhandare yendege yekuItaly ichagamuchirawo imwe ndege nyowani mwedzi unouya se HiSky anojoina mazita ekufona.
Kutora huwandu kusvika kune vatakuri vatsva gore rino, Milan Bergamo yakasimbisa Moldovan inodhura mutakuri (LCC), HiSky ichave ichivandudza zvakanyanya network yeairport mukupera kwaZvita. Ichitanga zvinongedzo kaviri-vhiki nevhiki kuBaia Mare, Targu Mures neChisinau, iyo LCC ichapa zvigaro zvinoda kusvika zviuru gumi nezvina panguva yeW14,000/21 kunzvimbo dzenhoroondo uye dzehupfumi dzeRomania neMoldova.
Kujoinha runyoro rwenzvimbo itsva, zuva rekutanga remwaka wechando rakaona Eurowings ichiunza kubatanidza kunzvimbo dzinokosha dzeDüsseldorf uye bhandi remaindasitiri eRuhr, kutanga kuvhura sevhisi yevhiki nevhiki inozowedzera kusvika katanhatu-vhiki nevhiki naFebruary. 2022. Zvichakadaro Ryanair yakawedzera nzvimbo shanu itsva kubva Milan Bergamo - Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm Arlanda neToulouse - pavanenge vachitangazve Düsseldorf Weeze neKharkiv, mutakuri weIrish ave kushanda 107 kuenda kuLombardy.
Nekuwedzera kweLondon Gatwick (katatu vhiki nevhiki ne easyJet), Paris Orly (katatu-pasvondo neVueling), uye Oslo (kaviri-vhiki nevhiki naFlyr kubva muna Ndira 2022), kubatana kwaMilan Bergamo kupasi kwakasimbiswa zvakanyanya.
Vachitaura nezvezviziviso zvitsva zvendege nenzvimbo, Giacomo Cattaneo, Director weCommercial Aviation, SACBO anoti: "Kudzoreredzwa kwetraffic uye kuvaka patsva network yedu kuri kuenderera, uye isu tichiramba tichibuda mumatambudziko emwedzi gumi nemisere yapfuura, zvikuru kudada kugamuchira ndege itsva uye nzira. Izvi zvekuwedzera kunetiweki yedu zvinoratidza kuzvipira kwedu kupa imwe sarudzo isu takagadzirawo zvivakwa zvedu kuti tive nechokwadi chekuti hatisi kugadzirira kupora kuzere asiwo nekuwedzera. Chiteshi chedu chitsva chemumhepo chapera, pamwe nekuwedzera kwemagedhi matanhatu ekukwira, mabhegi emakarosi uye nekuwedzera mupiro wekutengesa. " Cattaneo akaenderera mberi achiti: “Kudyara kweSACBO hakuna kugumira ipapo. Isu tiri kutoita imwe budiriro landside. Kugadziridzwa kwenzvimbo yekutarisa kwatanga uye munguva pfupi ichateverwa nekuwedzera nenzvimbo nyowani yekuchengetedza. Kunyangwe paine chinongedzo chechitima, hombe yekuchamhembe apron uye nyowani yekuchamhembe tekisi zvese zviri mupombi, kudyara kweMilan Bergamo mune ramangwana kwakajeka kune vatakuri vedu uye vatinoshanda navo zvakafanana. "